Nnukwu igwe na -ekwe igwe na -emepụta ihe na onye na -ebubata ya ANBANG
ihe ịchọ mma na rivets n'ọnụ ụzọ awara awara, iro ...
Ebe Mmalite Hebei, China Aha Aha Anbang
Nọmba nlereanya HBAB-PCW-1 Ọrụ ahịa mgbe ahịa gachara
Pịgharịa Materia Ewepụghị Steel, Square Bar, Now Bar, Square Pipe Pịgharịa Pịnye C, S, P, Ọdịdị
Ụzọ Njikwa Njikwa Mmemme PC Ike moto Ike nke 1.5 kW
Ibu igwe 350 n'arọ Akụkụ igwe 800x550x1100 MM
Akwụkwọ mpịakọta efu nwụrụ 6 Ọdụ ụgbọ mmiri XINGANG, TIANJIN
Etiti oge 5-7 ụbọchị Akpaaka Ee
Enwere ike itinye igwe a n'ọtụtụ ebe n'ọhịa ịchọ mma ọla. Na -arụ ọrụ na ihe igwe dị larịị, akụkụ anọ ma ọ bụ okirikiri, ndị ọrụ nwere ike iji ha mee ihe n'ụzọ dị mfe. Ọ nwere ike gbagọọ ụdị na nkọwapụta nke (S/C/P/O). Igwe ahụ dabara maka nhazi usoro ngwaahịa nke ụdị nha niile.
Ihe HBAB-PCW-1 HBAB-PCW-2
Ike Nhazi Max ▄ 10mm × 50mm 50mm × 10mm
■ 16mm × 16mm 20mm
Ọrụ Moter 3KW 380V 4KW 380V
Arụ ọrụ nhazi 1. E tinyela SIMATIC Controller-PLC na igwe anyị. Ha dị elu, ngwa ngwa. ogologo ndụ ogologo na ọ dị mfe ijikwa na-ejikọ igwe ndị ahụ nwere eriri dị iche iche. 2. Ntọala 200mm enyela ikike ịkpụzi ma gbasaa ogologo ndụ ha.
3. Eji ntụpọ ntụpọ dochie oghere eccentric ahụ, nke na -eme ka ebu ahụ dị mfe ma nwekwuo nkọ mgbe a na -ehulata nchara.
4. Ọnwụ bụ abụọ (isi na njide) n'otu karịa karịa ndị a na -agbakarị n'ọkụ, enwere ike ịgbaji ha.
5. A na -etinye oghere n'ime ihe mgbochi, makin id na -akwụsi ike karị, ma na -ezere mackine na -akwụsị mgbe enweghị mmanụ mmanụ.
6. Ụkwụ ụkwụ breeki na nke alumnum na -eme ka igwe dị mma ma kwụsie ike mgbe ọ na -arụ ọrụ ngwa ngwa.
7. A na -ekewa igbe elektrọnị na ike ọkụ, na -eme ka igwe dị nchebe.
8. Asụsụ ọtụtụ dị (Chinese, Bekee, Russicn).
9. Ihe enyemaka PCB niile dị ka ọkọlọtọ mba ụwa si dị, otu ihe ahụ n'ụwa niile, nke dabara adaba idozi ma ọ bụ gbanwee mgbe ọ nọ na nsogbu.
Nkwakọ ngwaahịa (mm) L × W × H = 800 × 560 × 1100/860 × 620 × 1200
NW (n'arọ)/GW (n'arọ) 230/280 230/280
Ihe HBAB-B1 Pope Circling Machine
Ike Nhazi Max □ 15 × 15mm-80 × 80mm
Ọkpụrụkpụ Ihe 1mm ~ 2.5mm
Ọrụ Moter 1.5KW 380V 50HZ
Arụ ọrụ nhazi 1. Igwe a enweghị mkpa ịgbanwe ebu, nwere ike ịhazigharị nha nha ọ bụla site na 15mm-80mm2. Ọ na -achọpụta na ogwe atọ ahụ bụ concentric na coplanar.
3. Anyị nwere ike ikwe ka ọkpọkọ nọ n'otu ọkwa ka anyị gbachara.
4. Ị nwere ike nweta arde ma ọ bụ okirikiri nha na -agbada n'etiti oghere.
Nkwakọ ngwaahịa (mm) L × W × H = 900 × 4800 × 1275
NW (n'arọ)/GW (n'arọ) 300/350
Ihe Igwe ọkụ eletrik HBAB-DCJ-C Igwe mpịgharị
Ike Nhazi Max ▄ 10mm × 30mm
■ 16mm × 16mm
Arụmọrụ moto Ike (KW) 1.5KW
Ọsọ ntụgharị (r/min) 1400
Voltaji (V) 200/380
Ugboro ugboro (HZ) 50HZ/3PH
Arụ ọrụ nhazi Ojiji nke teknụzụ nnyefe nwere ikike .2 .Ọ dị mfe ịbata ma wepụ ihe.
3.High quality Rolling na agbanwe agbanwe, ọ nwere ike na -emepụta na ogbe.
Nkwakọ ngwaahịa (mm) L × W × H = 1030 × 530 × 1175
NW (n'arọ)/GW (n'arọ) 250/320
Ihe Ọgwụ akpụ Machine
Ike Nhazi Max 16mm*60mm
Arụmọrụ moto 3kw 220v/380v 50hz
Nhazi arụmọrụ 1.Mold material for the H13 hot-Rolled die stee l. aro maka 40 br na, ekweghị ekwe dị elu, ezigbo isi ike. 2. Oghere mwepụ uzuzu na -eweta ịdị mma mgbe ị na -ehicha ájá; N'èzí wiilị gia, ọ dị mfe ịsacha ya na idozi ya.
3. Mkpuchi ahụ n'èzí moto na -eme ka igwe dị nchebe.
4. Ihe nkwụnye wuru n'ime iji gbochie ịtọpụ rollers nke mpịakọta ahụ kpatara.
5. Na vack nke holdup efere nke igwe. enwere ngwaọrụ ịpịgharị mpịakọta nha. dabere na ngwaahịa a kwesịrị ịtọ nha nri tupu oge eruo iji nweta nsonaazụ kacha mma.
6. Igwe a. a na -agbanwe eccentricity mpịakọta ka ọ bụrụ okirikiri osisi. ndụ ọrụ nke rola bụ ugboro atọ karịa ndị ọzọ.
Nkwakọ ngwaahịa (mm) L × W × H = 1055 × 570 × 1180
NW (n'arọ)/GW (n'arọ) 270/330
Ihe Ngwa igwe eletriki igwe eletriki
Ike Nhazi Max ▄ 10mm × 50mm
Ọrụ Moter 7.5KW 380V 50HZ nrụgide ọrụ: 200KN
Ọkpụkpụ ọrụ: 250mm
Arụ ọrụ nhazi 1. Igwe na -ekwe ekwe ekwe bụ ngwa dị mkpa maka ụlọ nrụpụta igwe. Site na ịrụ ọrụ siri ike yana arụmọrụ dị elu, HBAB-H16A dabara maka nnukwu nhazi nke ihe ndị e ji ígwè rụọ. 2. Site na teknụzụ dị elu, igwe dị mfe ịhazi, na -echekwa ya.
3. Ihe njikwa aka na ụkwụ abụọ dị, na -akwalite ịdị mma na nchekwa.
4. Mpaghara na -arụ ọrụ buru ibu yana imewe ezi uche na -eme ka 90% nke igwe a rụchara rụọ ọrụ site na igwe a.
5. Ventụ dị na azụ igwe.
6. Nlele nlele dị.
Nkwakọ ngwaahịa (mm) L × W × H = 1250 × 620 × 1100
NW (n'arọ)/GW (n'arọ) 550/600
Hebei Anbang Ornamental Iron Co., LTD, nke dị na shijiazhuang obodo, mpaghara hebei, anyị bụ ndị nrụpụta ọkachamara n'ịmepụta ihe nkedo al na ihe nrụpụta igwe, anyị nwere nkwado na narị narị ndị na -ere ahịa sitere na mba na mpaghara iri atọ, anyị nwere ike mee ụdị ihe nkedo ọ bụla, ihe adịgboroja na stampụ dị ka eserese gị ma ọ bụ nlele, dị ka ifuru na akwụkwọ, ube, olu, njikọ, ịchọ ọnụ ụzọ, ogwe ọkụ, akwụkwọ mpịakọta, rosettes, handrail, nsu, ọnụ ụzọ na windo. maka igwe: igwe mpịgharị, igwe na -ehulata, na igwe azụ azụ.
Ngwugwu maka igwe:
Nke gara aga: Hydraulic ekwe Machine
Osote: Ekepụtara Rolling Machine
Ọgwụ akpụ Machine
Pipe gburugburu igwe
Hydraulic ekwe Machine
Igwe ịgbado ọkụ bọọlụ
Ihe ịchọ mma nke Iron Gates, Akwụkwọ mpempe akwụkwọ, Handrail tube, Ogige Ogige, Nkume ịchọ mma, Akara stampụ,